🥇 Uhlelo lokuthengisa izimpahla
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 414
Ividiyo yohlelo lokuthengisa izimpahla
Oda uhlelo lokuthengisa izimpahla
Ukuthengisa esitolo - uhlobo olukhethekile lomsebenzi oluhambisana nokuthengiswa kwempahla ethile - izingcezu zempahla (imvamisa izingubo, okungajwayelekile - izicathulo, izesekeli, njll.), Okusele esitokweni. Ukubalwa kwemali ngokuvamile kubandakanya ukugcina zonke izinhlobo zamarekhodi ngesabelo esikhulu samarekhodi esitoko nokuthengisa. Indlela ethembeke futhi elula kunazo zonke yokwenza uhlelo lwesitolo lusebenze ngokugcwele wuhlelo lokuthengisa izimpahla. Uhlelo ngalunye lokuthengisa izimpahla lwenzelwe ukuhlela umsebenzi wenkampani yokuhweba, ukusheshisa inqubo yokucubungula idatha nokwenza uhlelo, nokwenza ukugeleza komsebenzi kube kuhle (ikakhulukazi, umsebenzi womnyango wokuthengisa). Abanye abaphathi, becabanga ukuthi bathole indlela eshibhile yokuthenga uhlelo lokuthengisa izimpahla, banquma ukulanda uhlelo lokuthengisa izimpahla online ngokubuza uhlelo lombuzo wesayithi lokusesha ukuthengisa izimpahla mahhala noma izinhlelo zokuthengisa impahla mahhala. Kufanele kuchazwe ukuthi le ndlela yenkinga ayilungile ngokuphelele futhi ayikwazi nje kuphela ukwehlisa ukuzethemba kwakho ezinhlelweni ezizenzakalelayo zokubalwa kwezimali, kepha futhi kungaholela ekulahlekelweni kolwazi. Iqiniso ukuthi akubona bonke abahleli bezinhlelo abazobhekelela ukunakekelwa kohlelo lwamahhala lokuthengisa ukulawula ukuthengiswa kwempahla (futhi uma kunjalo, hhayi ngaphandle kwesikhuthazo semali), futhi lesi sidingo sokwesekwa kwezobuchwepheshe kungekudala noma ngokuhamba kwesikhathi ngokuqinisekile ukuvela. Ngamanye amagama, bonke ochwepheshe batusa kuphela uhlelo lokuthengisa oluthengwe konjiniyela abathembekile.
Uhlelo oluthembeke kakhulu lokuthengisa izimpahla nokulawulwa kwesitoreji - i-USU-Soft. Lolu hlelo lokuthengisa izimpahla lunezinzuzo eziningi kunezifana zalo futhi luyakwazi ukukhombisa imiphumela emihle ngokushesha okukhulu. Kubonakala ngekhwalithi ephezulu yokwenza, ukusetshenziswa okulula, izindleko zebhajethi ezimnandi kanye nohlelo lokulungisa olufanele. Abathuthukisi be-USU-Soft banophawu lomhlaba wonke lokuzethemba i-DUNS, eqinisekisa ukwamukelwa kwalolu hlelo lokuthengisa ukuphathwa kwezimpahla emhlabeni wonke njengomunye wemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu yokuthengisa izimpahla. Uhlelo lokuthengisa lokuphathwa kwezimpahla olukusiza ukuba ukwazi ukuthengisa izimpahla likuvumela ukuthi ungasebenzisi kuphela imishini ejwayelekile esitolo (imishini yokugcina kanye nokugcina impahla - izikena zebhakhodi, amaphrinta okuthola, amalebuli, njll.), Kepha idivayisi entsha ngokuphelele, okungezona zonke izitolo esezazi kahle - amatheminali wokuqoqwa kwedatha wanamuhla (i-DCT). Le yithuluzi elincane elihlangene, lapho isisebenzi simane siphathe ephaketheni bese silisebenzisa njengoba kudingeka. Isibonelo: ukwenza i-inventory, uyayisebenzisa bese ugcine isikhathi esiningi. Idatha ifundwa bese idluliselwa ku-database eyinhloko. Idivayisi iyakwazi ukugcina inani elithile lemininingwane, okuhlanganisa okubalulekile. Ngakho-ke, noma kunezinto eziningi kakhulu ezinqolobaneni, ungazengeza zonke ku-database futhi amandla okugcina ohlelo lokuthengisa lwe-accounting alunamkhawulo.
Ukusebenza namakhasimende nakho kudinga ukunakwa okukhethekile. Imininingwane ngamakhasimende ingafakwa ngqo etafuleni lemali. Isibonelo, ufaka ku-accounting system yokuthengisa noku-oda ukuphathwa kwegama, isibongo, igama eliyigama leklayenti, nokuthi uneminyaka emingaki, uma efisa, lokho akuthandayo njalonjalo. Iklayenti ngalinye linikezwa amabhonasi ngokuthenga ngakunye. Sicabanga ukuthi akunasisekelo ukuchaza ukuthi luyini uhlelo lwamabhonasi, ngoba zonke izitolo kade zasebenzisa leli su lokuheha nokugcina amakhasimende. Bambalwa abantu abangamelana nethuba lokusebenzisa la mabhonasi anqwabelene esikhundleni semali futhi bathenge izimpahla eziningi esitolo sakho. Uzobona ukuthi yikuphi okuthengwa yikhasimende futhi kuthola amabhonasi. Ngakho-ke, uzokuqonda lokho akhetha ngakho-ke uthumela ukukhangisa bese unikela ukuthenga okunye, umkhuthaze ukuthi asebenzise imali ethe xaxa. Amakhasimende nawo angahlukaniswa ngezigaba ukwenza kube lula ukuzulazula kudathabheyisi enkulu enolwazi ngenani elikhulu lamakhasimende. Ukuphathwa kwamakhasimende yilokho okudingekayo kunoma iyiphi inhlangano yebhizinisi.
Lesi sigaba singasuselwa kunqubo ehlukile: ngokuya ngenani lokuvakashelwa (kumakhasimende ajwayelekile navamile); kuncike ebukhoneni noma ukungabikho kwezikhalazo (kulabo abangakaze bakhononde nalabo abenza njalo); ngokuya ngokuthenga okuthile, ngeminyaka, ngemigwaqo yokuhlala, njll. Amanye amaklayenti aze afanelwe nokunikezwa isimo se-VIP nawo wonke amalungelo adinga ukunikezwa. Futhi ukuxhumana njalo namakhasimende akho, ungasebenzisa izindlela ezi-4 zokuxhumana - iViber, i-SMS, i-imeyili kanye nekholi yezwi. Ungathumela izikhangiso, amakhathalogi, izinhlinzeko ezikhethekile, izaphulelo, noma umeme imicimbi, ukuhalalisela ngamaholide, ukubonga ngokuthenga, ukwazisa ngokufika okusha kwezimpahla nokunye okuningi.
Ngabe ufuna ukugwema amaphutha lapho usebenza nemikhiqizo nokuthengisa? Ngabe ufuna ukuhambisa omunye umsebenzi oyisidina kumshini ongawusingatha kangcono kakhulu futhi ngokushesha? Ngabe ufuna ukwengeza ibhizinisi lakho kakhulu kangangokuba izimbangi zakho zizoba semuva kakhulu? Ngemuva kwalokho zizwe ukhululekile ukukhetha uhlelo lwethu lokuthengisa lokuzenzekelayo. Siqinisekisa konke lokhu, futhi nokuningi. Sijwayele ukumangaza abathengi bethu. Kuwebhusayithi yethu esemthethweni uzothola lonke ulwazi oludingayo, futhi ukwazi ukulanda inguqulo yedemo yamahhala ukuyifaka enkampanini yakho bese uhlola ukuthi konke esikutshela khona kuyiqiniso noma cha. Singakuqinisekisa ukuthi uhlelo lwethu oluyingqayizivele lwe-automation ne-modernization yebhizinisi ngeke likudumaze futhi nakanjani uzofuna ukuqhubeka nokuyisebenzisa! Xhumana nathi nganoma iyiphi indlela oyithandayo. Sihlala sixhumana futhi sizokujabulela ukuphendula noma imiphi imibuzo ongayithola.